စာမူများတောင်းခံခြင်း : U.N.O.B
Than | May 14, 2010 | Comments 0
P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416
ရက်စွဲ။	။ ၂၀၁၀ခု၊ မေ (၁၁)ရက်
“ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများသတင်းစာစောင် ” ကို ယခုနှစ်မှစတင်၍ အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်းကြီး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသင်းဝင်များသို့ပုံမှန်အစီရင်ခံသွားရန်။
၂။ နီးစပ်ရာမြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း ဗဟုသုတဆိုင်ရာ၊ အသိပညာ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေရေး ဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာ၊ သိမှတ်စရာသတင်းများဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဆိုင်ရာများကို မြန်မာဘာသာဖြင့်တတ်နိုင်သလောက်ဖြန့်ချီပေးသွားရန်။
UNOB မှ ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေမည့် ” မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ သတင်းစာစောင် ” အတွက် အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း “စာမူ”များဆက်သွယ်ပေးပို့ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
UNOBအဖွဲ့ဝင်သော်၎င်း၊ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သူသော်၎င်း မည်သူမဆိုပါဝင်ရေးသားနိုင်ကြပါသည်။ စာစောင်သည် Commu -nity အကျိုးအတွက်သာလျှင်ဖြစ်၍ စာမူခငွေကြေးချီးမြင့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အောက်ပါခေါင်းစဉ်အရ၎င်း၊ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ၎င်း ပေးပို့နိုင်ကြပါသည်။ ဗဟုသုတ၊ ရသစာပေ၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ ဆောင်းပါး၊ သတင်း၊ ဟာသ စသည်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
စာမူနှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားစာစောင်များတွင်ပေးပို့ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း တာဝန်ယူပေးရမည်ဖြစ် ပါသည်။
သတင်းရေးသားပေးပို့ပါက သတင်းရရှိ (သို့မဟုတ်) ဖြစ်ပေါ်သည့် ဇစ်မြစ်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရပါမည်။
စာမူပို့ရာတွင် ကွန်ပျူတာစာမူဖြစ်စေ၊ လက်ရေးစာမူဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
စာစောင်၏ပုံမှန်ထုတ်ဝေမှုမှာ (၃)လ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။ (January / May / August / October)
ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေမှု အတွဲ(၁) အမှတ်(၁)ကို ဇွန်လ (ပထမ)အပတ် (၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေပါမည်။
စာမူရွေးချယ်ရေးမူမှာ UNOB အဖွဲ့၏မူအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ www.unobusa.org တွင်အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင် ပါသည်။
စာစောင်ကိစ္စဆက်သွယ်ရန်။	။ UNOB, P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416
136 South US Hwy 1, Vero Beach, FL 32962
thanvero@gmail.com, Cell Phone: 772-538-1343 / Fax: 772-567-0679
စာစောင်ထုတ်ဝေရေးတာဝန်ခံ(ယာယီ) ၊ UNOB-USA